रोजगार Archives - ramechhapkhabar.com
कतार सरकारले कम्पनीहरुलाई गर्यो यस्तो आग्रह, कामदारलाई फाईदा हुने !
२ जेठ, काठमाडौं । श्रमिकहरूको सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन कम्पनीहरूलाई कतार सरकारले आग्रह गरेको छ । निर्माण स्थलमा कामदारको सुरक्षाका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कतारको श्रम मन्त्रालयले मौसम र हावाको अवस्थाको पालना गर्न र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई...
मलेसिया रोजगार : नेपाली सुरक्षा गार्डको न्युनतम तलब २५ सय रिंगेट बनाउन प्रस्ताव, कार्यान्यन होला ?
३० वैशाख, काठमाडौं । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष मलेसिया सरकारले श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । गत फेब्रुअरीदेखि मात्र...
क्वालालम्पुर । मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरुले मलेसियाका बैंकबाट ऋण लाउने ब्यवस्था गर्न लागेको छ । मलेसियाको बित्त मन्त्रालयले सो कुराको ड्राफ्ट तयार गर्दै सोको जानकारी दिएको स्थानीय समाचार संस्थाले जनाएको छ । युएई लगायतका देशहरूमा त्यस देशमा काम गर्ने बिदेशी कामदार तथा नागरिकलाई ऋण...
२८ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले आउँदो जेठ ६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। कार्यालयले २०७८ माघ...
मासिक झन्डै २ लाख तलबसहित जापानमा नेपाली कामदारको माग,संख्या कति ?
२६ वैशाख, काठमाडौं । जापान एक कम्पनीले नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको छ । जापानको शिनसाकुरा सहरमा रहेको ER PLUS COOPERATIVE ASSOCIATION कम्पनीले ३ जना पुरुष नेपाली कामदारको माग गरेको हो । न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ । कामदारले हप्तामा ५...
मलेशियामा तलब बढेपछि नेपाली कामदार कस्तालाई फाइदा अनि कस्तालाई घाटा?
२३ वैशाख, काठमाडौं । मलेशिया सरकारले यही वर्षको मे १ तारिखदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपछि त्यसले उक्त देशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारहरूलाई पनि “फाइदा पुग्ने” अधिकारीहरूले बताएका छन्। पहिले १२ सय रिङ्गिट न्यूनतम तलब रहेको मलेशियाका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा अब न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिङ्गिट...
काठमाडौं । मलेसियामा नेपालीसहित अन्य विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले यसअघिको १ हजार २ सय रिंगेटबाट बढाएर श्रमिकको पारिश्रमिक १ हजार ५ सय बनाएको हो । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएर १ हजार ५००...
२३ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ व्यक्तिगत र वैधानिकीकरणमार्फत श्रम स्वीकृति लिन अब श्रमिक स्वयमले आवश्यक कागजात वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ( एफइआइएमस) अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिन वा वैधानिकीकरण गर्न दूतावासबाट र सम्बन्धित कम्पनीबाट भिसा,...
मलेशियामा तलब बढेपछि पहिलेदेखि कार्यरत नेपाली कामदारको हकमा के हुन्छ ?
दूतावासले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५०० सय रिंगेट नभए मागपत्र प्रमाणित नगर्ने
123 … 34 पछिल्ला »